बुवा आमिर खान र छोरी आयराको फोटोमा फ्यानहरुको आयो यस्तो कमेन्ट, रिसले आगो हुदै छोरीले दिईन् यस्तो जवाफ
बलिउड परफेक्शनिस्ट आमिर खानकी छोरी आयरा खान चर्चित स्टार किड्स मध्येकी एक हुन् । ग्ल्यामर्सको दुनियाँबाट टाढा रहेपनि उनी चर्चामा रहन्छिन् । आयरा प्रायः आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूद्धारा इन्टरनेटमा छाई रहेकी हुन्छिन् । हालै आयराले आफ्ना बुवा आमिर खानसँगका केही तस्विर पोस्ट गरेकी छिन् । यी तस्बिरहरू क्रिसमस पार्टीका हुन्, जसमा प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन्।
तर आखिरमा आयरा आमिर खानकी छोरी पनि हुन् । सबै कुरा थाहा पाएर कहाँ चुपचाप बस्न सक्थिन र ? उनले पनि एकै लाइनमा सबैको कुराको सीधा जवाफ यसरी दिएकी छिन् । बाबु छोरीको तस्बिरलाई लिएर मानिसहरूले प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक भने होइन । आमिर खान र आयरा दुवैले प्रायः सामाजिक सञ्जालमा सँगै तस्बिर सेयर गर्छन्। तर यसपटक भने हद थियो ।
आयराले इन्स्टाग्राममा आमिर खानसँगका केही तस्बिर सेयर गरेकी छन् । तस्विरमा बाबु छोरीको सुन्दर केमेस्ट्री देखियो । तर आइराको यो आरामलाई जनताले मन नपराएको देखिन्छ ।त्यसैले उनले आइरालाई निकै अनौठो प्रश्न गरेका छन् । आइरा प्रयोगकर्ताको कमेन्टको स्क्रिनसट लिएर स्टोरी सेयर गरेकी छिन् । कमेन्टमा एक प्रयोगकर्ताले सोधेका छन् –यिनी तिम्रो यति नजि किन? के यो तिम्रो आफन्त हो ?
प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्का एक जनाले लेखेका छन्–यिनीहरू बुवा र छोरी हुन् । जसमा एक फ्यानले जवाफ दिए, हो, यो आमिर खानकी छोरी हो । तपाईं पुष्टि गर्न गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि एक प्रयोगकर्ताले गुगलले पनि झूट बोल्न सक्ने लेखेका छन् । आफ्नो तस्विरमा मानिसहरूको यो कुराकानी देखेपछि आयराले पनि जवाफ नदिई बस्न सकिनन् ।
उनले लेखेकी छिन्, – यो नयाँ हो । तर हो, तपाईंले गुगलमा पढ्नुभएको सबै कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् । आयराको यो जवाफ ती मानिसहरूका लागि थियो, जो सधैं उनको र आमिर खानको फोटोको बारेमा कुरा गरिरहन्छन्।